Allbergsbacken Holmes ရဲ့ pulk ဖြစ်ပါသည်- နှင့် toboggan ပြေးအမှတ် 1 ကမ်းခြေHolmsjönအပေါ်စီးနှင့်အတူ. ခြေလျင်တောင်ပေါ်ရ, မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် Scooter နဲ့အတူ. ရံဖန်ရံခါရုံတောင်ကုန်းအထက်တွင်läggdanမှာကိုလည်းကားတစ်စီးပန်းခြံ shoveled.
ကျနော်တို့ site ပေါ်တွင်ကိုယ်တိုင်ညနေပိုင်းတွင်ရှိသက်ရောက်စေအလင်းရောင်ထဲမှာသွားသင့်. အဆိုပါအလင်းရောင်ဟာအလင်း၏အကူအညီနှင့်အတူကြွလာ (စိမ်းလန်းသော), ပေါ်မှာထိုင်ထ lampstolpen လမ်း. မီးတစ်ဦး timer နေရာမှာနှင့်အတူအလိုအလျှောက်ထွက်သွားပါ.
T.v.: တောင်ပေါ်၏ရုပ်ပုံများ, အားကစားအားလပ်ရက် 2012.
T.H.: အလင်းအိမ်ကိုဖွင့်ဖို့ button.
ဟေးလ် Way ကိုအောက်မှာတည်ရှိပါတယ် 320 (62°39’10.3″N 16°38’09.4″E) vid korsningen in mot Holms Kyrka när man kommer österifrån – från Sundsvall. ချဲ့နှင့်ပိုပြီးတိကျမှန်ကန်တွေ့မြင်ဖို့အောက်ကမြေပုံတွင်.
5/10: ကနေ New ကိုဂီတဗီဒီယို ...
16/9: တနင်္ဂနွေမှာ 14: အလင်းကို ...
10/9: Holmes တစ်ဆယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ...
8/9: အသစ်က Holmes အားကစားကလပ်ရဲ့ ...
8/9: သင့်ရဲ့အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင် Make ...
22/8: Indal IF - Holmes ...
အဆိုပါသတင်း widget ကမှယခင်သတင်း လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2018 (1) စက်တင်ဘာလ 2018 (4) သြဂုတ်လ 2018 (1) ဇူလိုင်လ 2018 (5) ဇွန်လ 2018 (6) မေ 2018 (6) ဧပြီလ 2018 (2) မတ်လ 2018 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (2) ဇူလိုင်လ 2017 (2) ဇွန်လ 2017 (1) မေ 2017 (4) ဧပြီလ 2017 (2) မတ်လ 2017 (4) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 (4) ဇန္နဝါရီလ 2017 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (2) နိုဝင်ဘာလ 2016 (1) စက်တင်ဘာလ 2016 (4) ဇွန်လ 2016 (5) မေ 2016 (5) ဧပြီလ 2016 (3) မတ်လ 2016 (6) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016 (4) ဇန္နဝါရီလ 2016 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (3) နိုဝင်ဘာလ 2015 (4) အောက်တိုဘာလ 2015 (1) စက်တင်ဘာလ 2015 (5) သြဂုတ်လ 2015 (4) ဇူလိုင်လ 2015 (4) ဇွန်လ 2015 (3) မေ 2015 (7) ဧပြီလ 2015 (4) မတ်လ 2015 (4) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2015 (4) ဇန္နဝါရီလ 2015 (8) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (3) နိုဝင်ဘာလ 2014 (4) အောက်တိုဘာလ 2014 (5) စက်တင်ဘာလ 2014 (3) သြဂုတ်လ 2014 (4) ဇူလိုင်လ 2014 (2) ဇွန်လ 2014 (6) မေ 2014 (5) ဧပြီလ 2014 (8) မတ်လ 2014 (11) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014 (4) ဇန္နဝါရီလ 2014 (7) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (12) နိုဝင်ဘာလ 2013 (12) အောက်တိုဘာလ 2013 (10) စက်တင်ဘာလ 2013 (9) သြဂုတ်လ 2013 (15) ဇူလိုင်လ 2013 (13) ဇွန်လ 2013 (18) မေ 2013 (17) ဧပြီလ 2013 (13) မတ်လ 2013 (11) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 (7) ဇန္နဝါရီလ 2013 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (9) နိုဝင်ဘာလ 2012 (9) အောက်တိုဘာလ 2012 (6) စက်တင်ဘာလ 2012 (10) သြဂုတ်လ 2012 (10) ဇူလိုင်လ 2012 (4) ဇွန်လ 2012 (11) မေ 2012 (10) ဧပြီလ 2012 (4) မတ်လ 2012 (7) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 (6) ဇန္နဝါရီလ 2012 (3) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (3)
9/12: utah: သတိပေးခြင်းလူတန်းစား 1, နှင်း, V ကို ... I de västra delarna, under morgonen... ဆက်ဖတ်ရန်
13/12: E4 Harnosand Örns ...
Bråte på vägen. Järnföremå... ဆက်ဖတ်ရန်